Raikitra ny CEPE: 31 389 ny mpiadina eto Antananarivo Renivohitra | NewsMada
Raikitra ny CEPE: 31 389 ny mpiadina eto Antananarivo Renivohitra
Hiatrika fanadinana CEPE, ny talata ho avy izao, ny mpiadina 31 389 ato anatin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra. Hiparitaka amin’ny foibem-panadinana 712 izy ireo. Fito taona ny zandriny indrindra raha 39 taona kosa ny zokiny indrindra amin’ny mpiadina eto Antananarivo. Hanomboka amin’ny 7 ora sy sasany ny fiantsoana ny anaran’ny mpiadina ka tokony ho tonga 15 minitra mialoha izany izy ireo, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra. Tokony tsy hohadinoina koa ny taratasy fiantsoana sy ny karatra maha mpianatra satria takina eo am-pidirana ny efitrano fanadinana. Ilaina ny mijery mialoha ny efitrano misy ny anaran’ny mpiadina tsirairay hisorohana ny fisavoritahana mialoha ny fiatrehana ny fanadinana. Raha ny tokony ho izy, azo jerena isaky ny foibem-panadinana ny lisitry ny mpiadina sy ny laharan’ny efitra, anio maraina.
52,41% ny taham-pahafahana CEPE andrana
Ho an’ny fanadinana CEPE andrana nataon’ny sekoly rehetra ao anatin’ny Cisco Avaradrano, nahatratra 52,41% ny taham-pahafahana, araka ny fanambaran’ny lehiben’ny Cisco, Rakotomalala Dera, omaly. Ny taranja kajy sy ny français no mbola nametraka olana amin’ny mpianatra, araka ny vokatra hita tamin’ny kopian’ny mpiadina rehetra. Manantena ny lehiben’ny Cisco fa tsy hanana olana amin’ny fiatrehana fanadinana ny mpianatra 7ème satria nahavita ara-potoana ny fandaharam-pianarana sy ny famerenana samihafa.
Manomboka ny taranja hatrehin’ny mpiadina ny tapany maraina ny opération sy problèmes. Manaraka avy eo ny connaissances usuelles, misy fakan-drivotra kely aorian’izay. Mamarana ny tantara sy fahaiza-miaina. Ho an’ny tapany hariva, misantatra azy ny taranja malagasy, mitohy amin’ny français. Aorian’ny fakan-drivotra indray ny taranja jeografia mamarana tanteraka ny fanadinana CEPE.